Banyere Anyị - Shenzhen Langxin Electron Co., Ltd.
Dabere na ọrụ achọrọ, enwere ike ijikọ ya na akụrụngwa dị ka nyocha barcode, igwe nbipu ọkụ, onye na-ebi akwụkwọ A4, onye na-agụ kaadị IC, onye na-agụ NFC, onye na-enyefe kaadị, onye na-enye aka na-ehicha aka, kamera, onye na-akwụ ụgwọ ụgwọ, na-akwụ ụgwọ na wdg.
N'ime ihe karịrị afọ iri na mbupụ, azụmahịa anyị na-agbasawanye na Europe, Middle East, North America, Southeast Asia, Australia na Africa. Ọkpụkpụ. Ejirila Kiosk Ngwaahịa n'ọtụtụ ebe dị ka gọọmentị, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akụ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọgwụ, sinima, nnukwu ahịa, ụlọ ahịa dị mma, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ọdụ ụgbọ oloko, ọdụ ụgbọ ala, ụlọ ngosi ihe ngosi, ebe ngosi ihe nka, ọdụ ụgbọ elu na ebe ndị ọzọ. .
LANGXIN nwere nke ya ọkachamara imewe otu, R & D otu, zuo otu, mmepụta otu, ahịa otu, nnyocha otu na mgbe-ire ọrụ otu.
LANGXIN tinyekwuo uche na ngwaahịa kachasị mma, nzaghachi ngwa ngwa na ọrụ kachasị mma nye ndị ahịa n'ụwa niile.
LANGXIN nwetara aha ọma site na mba ofesi maka ike nrụpụta siri ike ya, ogo ya, na ọmarịcha ọrụ ya. Anyị nwere ọnụnọ karịa 100 mba. Ka oge na-aga, anyị na-atụ anya ịtinyekwu ndị na-ekesa ihe na-achọ isonyere anyị. Anyị na-eji ndị ọrụ azụmaahịa anyị akpọrọ ihe ma na-arụkọ ọrụ ọnụ na ha iji gbasaa ahịa na uru ha. Anyị na-atụ anya iso gị na ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ na ụlọ akụ gị ma ọ bụ ọrụ kiosk ma nwee ntụkwasị obi na anyị ga-eweta ihe ịga nke ọma na mbọ gị.
A na-anabata nkọwapụta na aro gị mgbe niile! Langxin na-achọkarị nkwado enyi na ndị ahịa n'ụwa niile dịka onye na-ekesa, onye ọrụ, OEM, ma ọ bụ ODM. Na-atụ anya inwe mmeri-mmeri gị.